Cudurka Cagaarshowga A (Hepatitis A) | Somali Health
Home Cudurada Guud Cudurka Cagaarshowga A (Hepatitis A)
Cudurka Cagaarshowga A (Hepatitis A)
Cagaarshowga A ( Hepatitis A)
Cagaarshowga A waa jeermis aad u faafa waxaana sabab fayraska cagaarshowga A. Dadka qaar waxay qabaan jirro sahlan oo soconaysa dhowr toddobaad, halka kuwa kale u keeni dhibaatooyin halis ah oo qadan karta bilooyin. Caadi ahaan Feyruska wuxuu soo raacaa saxarada, waxaana gudbiya gacmaha kaddib marka la cuno cunto aan si fiican loo nadiifin iyo marka la cabo biyo aan nadiif aheyn oo uu jeermiga ku jiro.
Waa nooca ugu badan. Sanadkii wuxuu ku dhacaa tiro dhan 1.4 milyan, wuxuu ku badan yahay carruurta iyo dadka waaweyn, kuwaasoo ku nool goobaha ay nadaafaddoodu hooseyso oo dadka badan ay ku nool yihiin, sida xeryaha qaxootiga IWM
Si ka duwan noocyada kale, fayraska cagaarshowga A halis ma ahan oo badanaa waa laga soo kabsadaa.
Calaamadaha Cagaarshowga A
Haddii uu kugu dhaco virus, waxuu sababaa caabuq beerka, sidaas darteed had iyo jeer calaamadaha kaama muuqanayaan, laakiin haddi ay kaa muuqdaan waxaa laga yaabaa inaad yeelato:
Indhaha iyo maqaarka huruud ah, kaadida oo mugdi ah
Daaweynta cagaarshowga A
Waqti xaadirkan daawo lmalahan cagaarshowga A. Laakiin caadi ahaan iskaaga ayaa u fiicnaan dhowr bilood gudahood.
nasasho badi oo biyo badan cab
Qaado xanuun joojiyeyaasha, sida paracetamol ama ibuprofen, adigoo kaashanaya dhaqtarkaaga, maadaama aad u baahan karto inaad qaadato qiyaaso ka hooseeya kan caadiga ah ama iska ilaali daawooyinka qaarkood ilaa aad ka bogsato.
Ka hortagga cudurka cagaarshowga A waxaa muhiim u ah in laga fogaado qaabkii aan soo sheegnay in uu cudurka ku gudbo. Ugu horreyn, waa in la xoogiyaa nadaafadda gacmaha cuntada ka hor iyo markii musqusha la galo, waa in la xoojiyaa nadaafadda guriga iyo musqusha, waana in si fiican loo mayraa qudaarta, waa in la ilaaliyaa nadaafadda raashiinka la cuno.
Ka hortagga ugu muhiimsan waa tallaalka cagaarshowga nooca A (HAV), oo ka hortagaya in cudurka cagaarshowga uu qofku haleelo, wuxuu siinayaa awood difaac oo joogto noqota.
Previous articleFaallo: Abaarraha iyo caafimaadka bulshada.
Next articleCudurka Cagaarshowga C (Hepatitis C)